Warar - Faa'iidooyinka valve Globe
(1) qaabdhismeedka waalka dunidu wuu ka fududyahay waalka albaabka, soosaarka iyo dayactirkuna way ku habboon yihiin.
(2) dusha sare ee wax lagu xiro ma sahlana in la xidho oo la xoqo, sifeyn wanaagsan, furid iyo xirnaasho inta udhaxeysa saxanka waalka iyo dusha sare ee jirka oo ah qeybta qufulka jirka iyada oo aan qaraabo la socon, sidaa darteed xirashada iyo xoqitaanku ma ahan kuwo halis ah, waxqabadka xiritaanka wanaagsan, nolosha muddada dheer.
(3) marka la furayo iyo marka la xidhayo, istaroogga saxarku wuu yar yahay, sidaa darteed dhererka waalka dunidu wuu ka yar yahay waalka albaabka, laakiin dhererka dhismaha wuxuu ka dheer yahay waalka albaabka.
(4) Xuddunta furitaanka iyo xiritaanka wey weyn tahay, furitaanka iyo xiritaanka xariggu waa shaqo badan, waqtiga furitaanka iyo xiritaanka waa maamule.
(5) caabbinta dareeraha waa weyn tahay, maxaa yeelay marinka dhexdhexaadka ah ee jirka waalka waa mid jilicsan, caabbinta dareeraha waa weyntahay isticmaalka korontaduna waa weyn yahay
(6) marka cadaadiska magaca Pn ee jihada socodka dhexdhexaadka ah uu ka yar yahay ama u dhigmo 16Mpa, guud ahaan waa mid hoos mara, dhexdhexaadkuna wuxuu ka socdaa jihada hoose ee qalabka waalka; Cadaadiska Magac leh Pn ≥ 20Mpa, guud ahaan isticmaal ka hortag, socod dhexdhexaad ah oo ka yimaada jihada saxanka. Si loo kordhiyo awoodda xiritaanka. Markii la isticmaalayo, qalabka wax lagu gooyo ee la gooyey wuxuu u socon karaa oo keliya hal jiho mana beddeli karo jihada socodka.
(7) marka si buuxda loo furo, saxanka ayaa badanaa la duudsiiyaa.
Dhidibka of waalka waalka ee waalka adduunka waa perpendicular dusha shaabadaysan ee kursiga waalka. Stem furan / dhow istaroog waa waxyar oo wuxuu leeyahay ficil goyn oo aad loogu kalsoonaan karo, taasoo ka dhigeysa waalkaan mid ku habboon goynta dhexdhexaadka ama nidaaminta iyo ceejinta.